Ugu Fiican HC Calcium Hydroxide/Kaalshiyam Oxide Soo Saaraha iyo Warshada Takhasuska leh ee wax shiida |HongCheng
HC calcium hydroxide/kalsiyum oxide khaaska ah shiidadu waa qalab wax soo saarka calcium hydroxide la cusboonaysiiyay oo ku salaysan Raymond dhaqameed, tilmaamayaasha farsamada si weyn ayaa loo hagaajiyay marka la barbar dhigo nooca R-shiid, ganaax waxaa lagu hagaajin karaa inta u dhaxaysa 80-500 mesh. , HC China qalabka farsamaynta kalsiyum hydroxide ayaa xalliyay arrinta ku saabsan in mashiinka kalsiyum cawl dhaqameed aan la soo saari karin si ballaaran.Waa warshad cusub oo tayo sare leh oo badbaadinaysa tamar-badbaadinta china calcium hydroxide samaynta.Waxaan bixinaa adeeg la habeeyey, adeegga EPC si loo qanciyo baahidaada, fadlan guji hadda LA XIRIIR.
Qalabka xiddigta tignoolajiyada cusub iyo aaladda rullaluistemadka pendulum-ka ayaa leh isku halaynta sare, qaabdhismeed horumarsan oo macquul ah, gariir yar, buuq yar, hawlgal deggan.Waxay heshay faa'iidooyin bulsho iyo dhaqaale oo heer sare ah oo ay caddeeyeen jawaab-celinta suuqa.
Waxtarka sare iyo badbaadinta tamarta
Mugga weyn ee walxaha la warshadeeyay ee wakhtiga shiida halbeegga.Waa warshad tayo sare leh oo kaydisa tamarta taasoo isticmaali karta koronto yar oo dooxada.
Warshadu waxa ay qalabaysay qaadiyaha garaaca wadnaha kaas oo gaadhaya 99.9% heerka boodhka ururinta.Nidaamka xidhidhiyaha oo dhan ayaa asal ahaan xaqiiqsaday aqoon-is-weydaarsiga bilaa boodhka ah.
Qaybinta cabbirka walxaha lebbiska ah
HC calcium hydroxide/kalsiyum oxide-shiidida khaaska ah waxay soo saari kartaa ganaax u dhexeeya 80 -500 mesh, iyo qaybinta cabbirka walxaha waa lebis.
Habka qalabka is haysta iyo raad yar ayaa badbaadin kara maalgelinta bilowga ah.
Qaabka Tirada rullaluistemadka Wanaag Awoodda (T/H)
Warshadda Rinjiga Rinjiga Burada Ka Soo Qaada Shiineeska Furimaha Dagaalka Batroolka Coke Roller Mill Ultra Fine Mill Qiimaha Mashiinnada Milling Dhaqdhaqaaqa Fiican ee Ultra